Uxanduva loKhuselo kunye nokuSebenza koKhenketho
Yadalwa phantsi kwe-Federal Aviation Act ka-1958, i-Federal Aviation Administration (FAA) isebenza njengegosa elilawulayo phantsi kweSebe lezothutho lase-United States ngenjongo yokubambisa ukukhuseleko lwezithuthi zomphakathi.
"Ulwaphulo-mbambano loluntu" luquka yonke imisebenzi engeyiyo yempi, yabucala kunye nezoshishino, kuquka imisebenzi ye-aerospace. I-FAA iphinde isebenze ngokusondeleyo kunye nemikhosi yase-US ukuqinisekisa ukusetyenziswa ngokukhuselekileyo kweenqwelo zomkhosi kwi-airspace yoluntu kulo lonke uhlanga.
Uxanduva oluphambili lwe-FAA luquka:
Ukulawula ukuhamba kweenqwelo zomphakathi ukukhuthaza ukhuseleko ngaphakathi kwe-US nakwamanye amazwe. I-FAA utshintshiselwano ngolwazi kunye nabaphathi bamapolisa bangaphandle; iqinisekisa izitolo zokulungisa izithuthi zangaphandle, izixhobo zomoya, kunye ne-mechanics; inikezela ngoncedo lobugcisa kunye noqeqesho; uxoxisana ngezivumelwano zokuhamba kwamanye amazwe kunye namanye amazwe; kwaye uthatha inxaxheba kwiinkomfa zamazwe ngamazwe.
Ukukhuthaza nokuphuhlisa i-aeronautics yombutho, kubandakanywa iteknoloji entsha.
Ukuphuhlisa nokusebenza inkqubo yolawulo lwezithuthi zomoya kunye nokuhamba ngeenqwelo zomkhosi zomkhosi nezomkhosi.
Ukuphanda nokuphuhlisa iNkqubo ye-Airspace System kunye ne-aeronautics yabasebenzi.
Ukuphuhlisa nokuqhuba iinkqubo zokulawula ingxolo yendiza kunye nezinye iziphumo zemo engqongileyo,
Ukulawula i-US indawo yokuthutha indawo. Iisenisi ze-FAA zendawo zokuthengisa izithuba zokuthengisa indawo kunye nokuveliswa kwangasese kwemali yokuhlawula iindawo kwizithuthi ezinokusetyenziswa.
Uphando lweziganeko zeenqwelo-moya, izingozi kunye neentlekele zenziwa yiBhodi yeSizwe yokuThuthwa koThutho, i-arhente karhulumente ozimeleyo.
Umlawuli ulawula i-FAA, uncediswa yiSekela loMlawuli. Abalawuli abaDlelane abahlanu baxela uMlawuli kwaye baqondisa imibutho yamashishini asebenzayo kumsebenzi wenkqubo. Umcebisi oyintloko kunye nabaPhathi abaNcedisayo aba-9 baxela kuMlawuli. Abalawuli abaNcedisayo balawula ezinye iinkqubo eziphambili ezifana nezoLuntu, uLwabiwo-mali, kunye noKhuselo lweNkqubo. Sineendawo ezithoba zendawo kunye namaziko amakhulu amakhulu, uMike Monroney Aeronautical Centre kunye neWilliam J. Hughes Technical Centre.
Yintoni eya kuba yi-FAA yazalwa ngowe-1926 kunye nomthetho we-Air Commerce Act.
Umthetho wasungula isakhelo se-FAA yanamhlanje ngokulawula iCandelo leKhabinethi kwiSebe lezoRhwebo ngokukhuthaza ukukhutshwa kweenqwelo-moya, ukukhupha nokunyanzelisa imigaqo yendlela yokuhamba emoyeni, abaqhubi beenqwelo-mvume, ukuqinisekiswa kweenqwelo-moya, nokusebenza nokugcina iinkqubo zokuncedisa abaqhubi beenqwelo-moya ukuhamba esibhakabhakeni . Isebe elitsha le-Aeronautics leSebe lezorhwebo liye lakhutshwa, lijongene nokuhamba kwe-US kwiminyaka eyisibhozo ezayo.
Ngomnyaka we-1934, i-Aeronautics yangaphambili yesebe yaqanjwa ngokuthi iBusiness of Air Commerce. Ngenye yezenzo zayo zokuqala i-Bureau isebenze kunye neqela leenqwelo zeenqwelo-moya ukusekela iziko lolawulo lokulawula izithuthi lokuqala e-Newark, eNew Jersey, eCleveland, e-Ohio, naseChicago, e-Illinois. Ngowe-1936, i-Bhunga ithatha ulawulo lwamaziko amathathu, ngaloo ndlela isungula umgaqo wolawulo lolawulo lwangaphakathi kwimisebenzi yokulawula i-air traffic kwiindawo ezinkulu zeenqwelo-moya.
Ukugxilwa kweNgcaciso kwiKhuseleko
Ngowe-1938, emva kweembalo zeengozi ezibulalayo eziphezulu, ukugxininiswa kwasemthethweni kwatshintshela ekukhuselekeni kwendlela yokukhusela i-Aeronautics Act. Umthetho wadala iGunya le-Aeronautics Authority (Independent Authority Aeronautics Authority), kunye neBhodi yoKhuseleko lwe-Air. Njengomhlahlandlela weBhodi yeSizwe yokuThuthwa koThutho, iBhodi yoKhuseleko loMoya yaqalisa ukuphanda izingozi kunye nokucebisa indlela enokuthintelwa ngayo.
Njengomlinganiselo wezoKhuselo weMfazwe ye-2000, i-CAA ithatha ulawulo lokulawula iinkqubo zendlela yokulawula i-air kuzo zonke iinqwelo-moya, kubandakanywa iinqaba kwiinqwelo-moya ezincinci. Kwiminyaka emva kokulwa kwemfazwe, urhulumente wezepolitiko uthatha uxanduva lolawulo lwezithuthi zomoya kwiindawo ezininzi zeenqwelo-moya.
NgoJuni 30, 1956, i-Trans World Airlines Super Constellation kunye ne-United Air Lines DC-7 yaxhamla kwi-Grand Canyon yabulala bonke abantu abayi-128 kwiiplanki ezimbini. Ukuphahlazeka kwenzeka ngosuku olusenyakatho ngaphandle kolunye uhambo lwezithuthi kwindawo. Le ntlekele, kunye nokusetyenziswa okuqhubekayo kweenqwelo ezihamba ngeenqwelo zokuhamba ngeemoto ezihamba ngeemoto ezihamba ngeekhilomitha ezili-500 ngeyure, zaqhuba umda wokuzama ukuqinisa ukhuseleko loluntu.
Ngo-Agasti 23, 1958, uMongameli uDwight D. Eisenhower wasayina uMthetho we-Federal Aviation Act, owawususa imisebenzi yeGunya loLawulo lwe-Civil Aeronautics kwi-Arhente entsha ye-Federal Aviation Agency ejongene nokuqinisekisa ukukhuseleko kwazo zonke iinkalo ezingekho kwimpi.
NgoDisemba 31, ngo-1958, i-Federal Aviation Agency yaqala ukusebenza kunye ne-Air Force General Elwood "Pete" Quesada ekhonza njengomlawuli wayo wokuqala.
Ngo-1966, uMongameli uLyndon B. Johnson , ekholelwa inkqubo eyodwa yokulungelelaniswa kwemimiselo yomhlaba, ulwandle kunye nokuhamba kwezinto ezifunekayo, kwayalela iCongress ukudala i-Cabinet yeSebe lezothutho (iDOT). Ngo-Apreli 1, 1967, i-DOT yaqalisa ukusebenza ngokupheleleyo kwaye yatshintsha ngokutsha igama le-Federal Aviation Agency kwi-Federal Aviation Administration (FAA). Ngomhla ofanayo, umsebenzi wokuphenya ngengozi yeBhodi yoLondolozo lweMpilo yakudala udluliselwe kwiBhodi yeSizwe yokuThuthwa koThutho (iNTSB).
Phantse iHlf yaseMelika ithatha iLuhlu olulodwa lweMithi yokuLawulwa kweMithi
Iminyaka Eyishumi Yenkomo Yengulube Yengulube
Iindawo zokungcwaba zezilwanyana ezifumaneka kwi-Internet
Amaziko okuLawula izifo (iCDC)
Indlela yokutshintsha iKhadi leKhuseleko leNtlalo elilahlekileyo okanye elibiweyo
Isicwangciso sokuQala se-Obamacare sika-Obama
Amalungu eCongress by Professional
Ukulwa nokuShatshazwa kwezoBundlobongela eMelika
Izilwanyana zokuqala: Izilwanyana kwiNdlu eNtsundu
I-New York City ye-Vaisakhi Day Parade yaseNew York
Ukucoca kunye nococeko
Imfazwe yesithathu yePunic neCarthago Delenda Est
Ubumbano weKhabinethi kuRhulumente waseKhanada
Abafundi beenkolelo kunye namaZiko kaKristu
Imiba enomdla malunga neeAtom
Ubungqina bobugcisa: Iinkcazo kunye nemizekelo
UCranberry Morpheme wasetyenziswa ngegrama
Coordinate Geometry: I-Cartesian Plane
Yintoni iAnastrophe kwiRhetoric?
I-Veronica ephuma "Ukuthuka ka-Kiss's Pharaoh" - I-Comedic Female Monologue
I-Morehouse College I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Atria ye ntliziyo
Indlela yokwenza Amakristal eSulfure
Iifowuni yeSpanish Izifinyezo
Ziziphi ii-Best Animated Science Fiction IiFilimu?
Imfazwe yaseKorea: Ngokubanzi uMatthew Ridgway